I-China I-High-high-power Carbon Fiber EOD Telescopic Manipulator Manufacture and Factory |Heweiyongtai
I-Telescopic manipulator luhlobo lwesixhobo se-EOD.Iqulathe uzipho lomatshini, ingalo yomatshini, ubunzima obuchaseneyo, ibhokisi yebhetri, isilawuli, njl.njl. Esi sixhobo sisetyenziselwa ukulahlwa kwezinto ezidubulayo eziyingozi kwaye silungele ukhuseleko loluntu, ukulwa nomlilo kunye namasebe e-EOD.Yenzelwe ukubonelela umqhubi ngesixhobo sokuma sokuma seemitha ezi-3, ngaloo ndlela yandise kakhulu ukusinda komqhubi ukuba isixhobo siqhushumba.
I-Telescopic manipulatorluhlobo lwesixhobo se-EOD.Ibandakanya uzipho lomatshini, ingalo yomatshini, ubunzima, ibhokisi yebhetri, isilawuli, njl.Iyakwazi ukulawula ukuvuleka nokuvalwa kozipho.Esi sixhobo sisetyenziselwa onke amanqaku ayingozi aqhumayo kwaye afanelekile ukhuseleko loluntu, ukulwa nomlilo kunye namasebe e-EOD.Yenzelwe ukunika umsebenzisi a3 Iimitha zokumaukubanakho, ngoko ke kwandisa kakhulu ukuphila komsebenzisi ukuba isixhobo siqhushumba.
Umthamo wokuxhwila ophezulu: unokubamba malunga ne-15 kg yezinto.
Iimitha ezi-3 zokukwazi ukuzimisa
Uzipho lomatshini lunokusetyenziswa ngombane kwaye lujikelezwe ngama-360° ngesandla;
Ukuphakama kwesibiyeli kulungelelaniswa kunye namavili asemhlabeni wonke anokuthi atshixeke;
Izinto eziphathekayo Amandla aphezulu obunzima bokukhanya kwe-carbon fiber
Ukubamba uMmandla Ngaphezu kwe-15 kg
Max Clamp Weight 20kg
Counter Weight 9kg
Ixesha leNdibano Imizuzu emi-3
Ubude bePole yeTelescopic 4.68m
Ubungakanani (cm): 1286*346*140mm
Ixesha lokusebenza Iiyure ezi-5.rhoqo
Uzipho oluPhezulu lokuVulwa 20.5cm
Ukujikeleza kozipho I-360 degrees iyaqhubeka
Ngaphambili: ICarbon Fiber EOD Telescopic Manipulator HWJXS-III
Okulandelayo: Izixhobo ezingabhubhiyo ngamapolisa aBamba iigloves
Ikhamera yePole yevidiyo yeTelescoping
Isipili soHlolo seTelescopic esiKhanyisiweyo
Ikhamera yokukhangela ye-Telescopic
Iskena esiphathwayo seX-Ray, Ukulandela umtshini oqhumayo, Ibhola lokugada, Inkqubo yokuHlola yoKhuseleko lweX-Ray, I-X-Ray Baggage Scanner, Telescopic Manipulator Arm,